Betsaka ny olona mampiasa HomeBridge ho an'ny tahiry na fanamorana. Ity tetik'asa ity dia mamela ireo vokatra izay tsy nohamarinin'ity orinasa ity hanatevin-daharana ny ekosistra Apple. Ny lahatsoratray dia hanampy anao hisafidy ireo fitaovana mahaliana indrindra izay hanatsara ny trano an-tsainao.
Amazon Alexa, Apple HomeBridge, Google Home, hevitra
Jiro krisimasy 250 RGBW. FAMERENANA
Jiro hazo krismasy, twinkly, 250 twinkly
Mety ho majika kokoa ve ny fialantsasatra noho ny vahaolana mahira-tsaina? Hay hay! Ary ny jiro hazo krismasy marani-tsaina avy any Twinkly dia afaka manampy. Ao amin'ny famerenana, jereko ny maodely 250 RGBW. Twinkly dia orinasa tanora ...
Amazon Alexa, Apple HomeBridge, Google Home, Home Assistant, Vaovao
Ambi dia mandefa mpanara-maso rivotra - Ambi Climate Mini
Ambi dia orinasa any Hong Kong izay manana mpanara-maso fifehezana rivotra madio ao amin'ny portfolio-ny. Vao namoaka modely vaovao antsoina hoe - Ambi Climate Mini. Ambi dia efa manana mpanara-maso "lehibe" ao amin'ny portfolio-ny, izany ...
Apple HomeBridge, Apple HomeKit, Home Assistant, Tutorials, Fandraisana Xiaomi
ZigBee - inona izany ary inona no tanjona hofidina?
Vavahady ZigBee. Ren'ny rehetra ny zavatra sasany, fa rehefa mividy dia misy fanontaniana sarotra mipoitra. Mety hiasa ve ny zava-drehetra? Mila manana tanjona marobe ve ianao? Ao amin'ny lahatsoratra anio, hohazavaina amin'ny antsipiriany kokoa ny ZigBee ary hampiseho izay ...
Apple HomeBridge, Apple HomeKit, FIBARO, Google Home, Home Assistant, IKEA Home Smart, Tutorials, Fandraisana Xiaomi
Ahoana no fomba hiantsoana ireo fitaovana maranitra ao an-trano? Guide
4 Jolay 2020
Fantatrao ve io fahatsapana io rehefa te-hamono ny jiro eny amin'ny lalantsara ianao, ary i Siri dia manjary mandrehitra azy ao amin'ny efitrano fatoriany? Na te hanidy ny jamba any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ary manapa-kevitra ny Google hanidy azy ireo daholo? Amin'ity torolàlana ity dia hiteny aminao izahay ao amin'ny ...
Ahoana ny fomba hamerenana ny HomeBridge amin'ny Rpi 4 (macOS)
homebri, homebridge, voaroy pi 4b
Manomboka ny fahafinaretantsika amin'ny HomeBridge dia tsy maintsy tadidintsika ny zavatra iray tena lehibe - manao backups. Mizara roa ho olona roa izao tontolo izao. Ireo manao backups sy ireo manomboka manao azy. Amin'ity ...